राष्ट्रियसभाको विषयमा पार्टीको निर्णय लागू हुँदैन : राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
उहाँले अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि बामदेव गौतमको नामको प्रस्ताव आएको तर, यो विषय पार्टी आँफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार पनि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सभाको विषय एकदमै उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने उल्लेख गर्दै यस्को बारेमा तत्काल बोल्न हतार हुने र एक दुई दिन कुरे नतिजा प्रष्टसंग आउने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सभाको विषयमा पार्टीको निर्णय लागू नहुने पनि प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘यो मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय लागू हुँदैन् । अस्ति पार्टीले १८ जनाको विषयमा फैसला गर्यो । त्यो पार्टीको निर्णय हो । त्यही अनुसार कार्यान्वयन भयो ।
यो राष्ट्रपतिको मनोनयनको विषय, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन । पार्टीले सुझाव दिन सक्छ । पार्टीले सुझाव दिएको पनि छ । त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिने ? भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक र अत्यन्तै परिपक्व ढंगले त्यसको निश्कर्ष निकाल्नुहुनेछ ।
जुन निश्कर्ष समय आएपछि निस्किनेछ । अहिले मैले धेरै बोल्नुपर्ने छैन् । एक जना व्यक्ति राष्ट्रियसभामा को जाने ? को नजाने ? भन्ने कुराले पार्टी विभाजनमा लगेर जोड्नु भनेको हाम्रो विषयमा बुझ्ने त्रुटि हो कि बुझाउने तहमा रहेकाहरुको त्रुटि हो, यो खोजीको विषय हो ।’
उहाँले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय फिर्ता भएकोले अब यसबारेमा चर्चा गर्न जरुरी नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
पछिल्लो समय नेकपा भित्र केही विषयहरुलाई लिएर नेतृत्वको बीचमा मनमुटाव भएको हो कि भन्ने चर्चा तथा परिचर्चा भएको सुनाउँदै त्यस्तो केही नभएको जिकिर पनि उहाँको थियो ।
उहाँले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोलिसकेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले संसदमा भनिसक्नुभएको छ कि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर संसदमा प्रस्तुत भएको छ, सभामुखले यो कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै अनुमोदन हुन्छ । त्यो अनुमोदन हुन्छ ।
यसमा केही विषयहरु राष्ट्रलाई घाटा हुने खालका छन् भने हामी देशलाई घाटा हुने खालका कुरा गर्दैनौं । विदेश नीतिका आधारभूत पक्षहरु, राजनीतिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने पक्षहरु, सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने पक्षहरु, सरकारलाई विदेश नीतिसम्बन्धी आधारभूत मान्यताबाट दायाँबायाँ हुने छुट छैन् ।
हिजोपनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा विदेश नीति परिवर्तन भएनन् । आजको युगमा हामी संविधान, देशको हित र आधारभूत विदेश नीतिअनुसार अघि बढ्ने हो । हामी त्यहीअनुसार अघि बढिरहेका छौं ।
आजको कुटनीति भनेको हिजोजस्तो कुटनीतिलाई राजा महाराजाहरुले आफ्नो पकेटमा राख्ने अहिलेको व्यवस्था त्यो होईन् ।’ सल्लाहकार भट्टराईले एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
उहाँले गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको प्रकरणमा सत्य, तथ्य के हो ? भन्ने कुरा छानबिन गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । यो प्रकरणमा छानबिन भइरहेको र छानबिनमा जे आउँछ, त्यसलाई सबैले मान्नु पर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो ।
यो प्रकरणमा सरकार कहीँपनि नचुकेको बताउदै उहाँले गल्ती गर्नेहरु सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।